तातो पानी र ताप सिस्टम लागि इष्टतम सर्किट को चयन - आरामदायक जलवायु प्रदान मा मुख्य समस्या छ। सबै भन्दा अधिक प्रयोग सर्किट निजी घरमा ताप प्रणाली बाध्य र प्राकृतिक परिसंचरण, एकल-ट्यूब, डबल पाइप, साथै "Leningrad" र विकिरण सर्किट ताराहरु लाइनहरू सिस्टम: प्रकार निम्न।
उपयोगिता लागि प्रमुख महत्व बस विभिन्न उद्देश्यका लागि घरहरू, कार्यालय र कारोबार प्रणाली हीटिंग छ। को तेजी विकास प्रविधिहरू भए तापनि मानिसजातिको हालसम्म अझै आफ्नो घरमा गर्मी स्रोतहरू स्थापना गर्न आवश्यकता को छुटकारा छैन भयो। स्थापना र घटक लागत एक उच्च स्तर मा रहन्छ गर्दा ताप, वर्ष मात्र 4-6 महिना द्वारा संचालित छ। सेवा जीवन, विश्वसनीयता र दक्षता ताप प्रणाली को योजना निजी घरमा हदसम्म ताराहरु बनेको छ कसरी भर पर्छन्।
एक घर वा निजी घर मा ताप सिस्टम को लेआउट यो शोषण योजना छ जसमा अवस्थाको विश्लेषण साथ सुरु हुन्छ। व्यास पाइपलाइन मुख्य जडानहरू, साथै राम्ररी प्रभावकारी ताप सुनिश्चित गर्न बयलर चयन गर्न आवश्यक इन्धन को प्रकार निर्धारण गर्न।
ताराहरु सर्किट प्रभावित जो ताप सिस्टम को प्रमुख घटक, हो:
बयलर उपकरण, यसको मुख्य प्रदर्शन र शक्ति को प्रकार।
ताप उपकरणहरू को प्रकार।
परिसर (फर्श, इन्सुलेशन, क्षेत्र, अन्य सुविधाहरू) को सुविधाहरू।
इन्धन को प्रकार
सबै भन्दा लोकप्रिय गर्मी स्रोत ग्यास बयलर छ। दक्षता, ब्याट्री जीवन र बहुमुखी प्रतिभा को आधार मा निजी घर, अपार्टमेन्ट वा खेत भवन लागि उपकरण चयन गर्नुहोस्। साथै, डबल-बयलर सेनेटरी प्रयोगको लागि पानी गर्मी गर्न सक्षम छ। यस मामला मा, ताप सिस्टम बयलर गर्न ग्याँस जडान, पाइपिंग ताराहरु योजना खातामा परिसंचरण पंप शक्ति र एक अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन लिनुपर्छ।
तपाईं दुई-सर्किट पट स्थापित पंप बाहेक, दुई-कथा संरचना गर्मी योजना भने, कूलेंट परिसंचरण प्रदान गर्न आवश्यक सामान।
यी उपकरणहरू स्थापना को बाटो मा भिन्न, ईंन्धन र शक्ति मतलब। घरेलु बयलर एक कठोर (काठ) जस्ता ईंन्धन, डिजेल, तरल (तेल), कोइला, वा द्रवीभूत प्राकृतिक ग्याँस, साथै छर्रहरुमा मा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम लोकप्रिय बिजुली बयलर, को इलेक्ट्रोड र ताप हुन सक्छ जो। साथै, त्यहाँ फरक ईंन्धन मा सञ्चालन संयुक्त एकाइहरु छन्।
थुप्रै बयलर तल्ला डिजाइन द्वारा विशेषता छन्, तर त्यहाँ पर्खाल-माउन्ट, को कुन शक्ति को प्रजातिहरू छन् - कम से कम 25 किलोवाट। छुट्टै स्थानमा आवश्यक छैन विद्युत इलेक्ट्रोड बयलर समायोजित गर्न, तिनीहरूले सीधा पाइपिंग सिस्टम मा माउन्ट छन्। अधिकांश आधुनिक मोडेल तातो पानी को लागि एक ताप सर्किट संग सुसज्जित छन्, र ठूलो क्षेत्रमा लागि ताप तिनीहरूले क्यासकेड मा जम्मा गर्न अनुमति दिइएको छ।
कुनै पनि मामला मा, तपाईं आफ्नो काम स्वचालित र एकल-मंजिल्ला घर ताप प्रणाली लागि सर्किट को सञ्चालन सरल गर्न अनुमति दिँदा, बयलर एकाइहरु चयन गर्नुपर्छ। उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विद्युत नेटवर्क को ताप सिस्टम को निर्भरता छ। यो अवस्था पूर्णतया छ विद्युत पंपों बिना एक निजी घर सर्किट मा ग्याँस-निकाल बयलर र ताप स्थापना प्रयोग पूरा गर्दछ।
radiators र रजस्टर - निजी घरमा को लागि हीटर दुई मुख्य समूह विभाजित गर्न सकिन्छ। आफ्नो अपरेटिङ सिद्धान्त एकदम सरल छ। दुवै अवस्थामा गर्मी स्थानान्तरण तरल पदार्थ हीटर भित्र सार्दा, बिस्तारै वातावरण गर्न गर्मी हराउछ। यी संरचना को छनोट संरचना उचाइ मा निर्भर गर्दछ। परिसर दुई वा बढी स्तर मा स्थित छ भने, यो संकुचित र सौंदर्य radiators प्राथमिकता दिन मनमोहक छ।
को कोठा मा फर्नीचर को स्थान को मामला मा थप सुविधाजनक अझै पनि एक निजी घर को ताप प्रणालीमा radiators को प्रयोग। तिनीहरूले विन्डो खुलने अन्तर्गत राखिएको हो, तिनीहरूलाई पर्खालहरु स्थापित गर्न सकिँदैन वा तल्ला निर्माण मा लुकाइन् हुन जडान लागि ducts। गर्मी स्थानान्तरण गरम ठाउँ उद्देश्य र क्षेत्र निर्धारण गरे खण्डहरू संख्या कारण समायोजन गर्नुहोस्।
हीटर प्रकार यस्तो दबाब, फ्लो दर र कूलेंट तापमान रूपमा सिस्टम को विशेषताहरु, द्वारा निर्धारित। यी सूचकहरू आधारमा ribbed एल्यूमीनियम वा कच्चा फलाम radiators चयन गरिएका छन्। कारण इन्फ्रारेड विकिरण र एक ठूलो गर्मी क्षमता गर्न - फलाम उपकरणको करङहरु बीच च्यानलहरू मा Convective हावा प्रवाह मार्फत आगमन गर्न एल्यूमीनियम स्थानान्तरण गर्मी को निर्माण।
जब कूलेंट तापमान 90-95 ° सी र एक कम प्रवाह दर फलाम साधन प्राथमिकता दिन मनमोहक छ। 65-80 ° C को एक तापमान र ताप सिस्टम मा परिसंचारी पंप को उपस्थिति मा एल्यूमीनियम finned radiators प्रयोग गर्न बेहतर छ।
पनि निजी घर ताप सिस्टम अक्सर न्यानो फर्श को उपकरण complemented छ। अधिकतम सहज वातावरण 40 ° सी को दायरा छ जो पाइपिंग मा कूलेंट तापमान, सुनिश्चित गर्नेछ उपकरण पानी तल्ला ताप पम्पिंग उपकरण स्थापना आवश्यक छ।
ताप उपकरणहरू र बयलर पाइपलाइन द्वारा जो radiators को व्यवस्था, निर्माण को फर्श को संख्या र यसको परिधि को लम्बाइ निर्भर उपकरण परस्पर छन्।
पाइपिंग सामाग्री सुविधा र स्थापना अवस्था, आफ्नो स्थायित्व, अनुरक्षणीयता आधारित रोजेको हुनुपर्छ।
आधुनिक ताप प्रणाली मा भारी स्टेनलेस, इस्पात र polypropylene र धातु प्लास्टिक आउन जस्ती पाइप उत्पादन प्रतिस्थापन गर्न। डाली-फलाम radiators संयोजनमा व्यापक तामा पाइपिंग प्रयोग गरिन्छ।
गर्मी स्रोत उपस्थिति मा ताप सिस्टम द्वारा खुसीले गदगद मुख्य वस्तु सार्दा कूलेंट हुनेछ। चयन गरिएको योजना को प्रकार सञ्चालन मापदण्डहरु र ताप सिस्टम को स्थायित्व निर्भर हुनेछ। नियम, यी काम बाहिर निर्माण वा प्रमुख मरम्मत को चरण मा, किनभने यसले सबै रहन ठाँउ असर लगे छन्।
त्यहाँ ताप प्रणाली को दुई मुख्य प्रकार हो। ती हुन्:
बन्द ताप सिस्टम एक निजी घरमा। यो योजना कृत्रिम परिसंचरण प्रदान गर्दछ।
पहिलो मामला मा यो कारण यसको ताप र विस्तार गर्न कूलेंट प्राकृतिक परिसंचरण हो। एउटा बन्द प्रणालीमा दबाब एउटा बन्द पाश ताप प्रयोग गर्दछ। तरल पदार्थ परिसंचरण र गर्मी पंप उपकरण को Redistribution प्रदान।
यी मध्ये कुनै पनि विकल्पहरू फरक wiring चित्र संग प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। सबै भन्दा अधिक प्रयोग एकल-ट्यूब, डबल पाइप र लेआउट बीम। हामीलाई थप विवरण तिनीहरूलाई विचार गरौं।
को ताप सिस्टम जडान एकल-पाइप सर्किट एक सुसंगत स्थापना उपकरणहरू समावेश छ। गर्मी स्थानान्तरण तरल पदार्थ को ताप उपकरण प्रवेश, र त्यसपछि, तिनीहरूलाई मार्फत पारित यसको गर्मी केही दिने। यसरी, अन्तिम उपकरण कम सम्भव तापमान सूचक संग तरल प्रवेश गर्छ। कि यो कोठा जलवायु असर थिएन, अन्तिम हीटर मा खण्डहरू संख्या वृद्धि गर्न छ।
मिति, त्यहाँ एक-पाइप ताप सिस्टम को काम अनुकूलन गर्ने प्रविधिहरू छन्। रूपमा सहायक ताप तत्व स्थापित गर्न सकिन्छ नियामकहरु, बल वाल्व, थर्मास्टाटिक वाल्व वा सन्तुलित वाल्व। यो गर्मी आपूर्ति को उत्पादन मा एक ब्यालेन्स सुनिश्चित गर्नेछ। ओभरल्यापिङ एक विशेष रेडियेटर एक सम्पूर्ण रूपमा ताप सिस्टम को सञ्चालन अबरोध छैन।
एक निजी घर मा ताप सिस्टम को क्षेत्रीय ताराहरु को रूप मा बुझे गर्न सकिन्छ:
तेर्सो प्रणाली को परिसंचारी पम्प प्रयोग गरेर।
ठाडो प्रणाली वा प्राकृतिक परिसंचरण संग संयुक्त, र पनि परिसंचारी पंप उपकरण द्वारा।
तेर्सो एक-पाइप सिस्टम
यो योजना लोकप्रिय "बाट Leningrad" भनिन्छ। पाइप को ताप संरचना निर्मित वा तल्ला माथि छापिएको गर्न सकिन्छ। त्यसैले, गर्मी हानि कम गर्न तिनीहरूलाई ढाक्नु गर्न सिफारिस गरिएको छ।
स्थापना प्रवाह गर्ने कूलेंट आन्दोलन तिर अलिकति ढलान संग गरिन्छ। ठाउँ हीटर नै स्तर मा राखिएको हुनुपर्छ। प्रदान गरिनु पर्दछ प्रणाली बाट हावा हटाउन Majewski क्रेन।
यस मा एक पाइप ताप सिस्टम को ताराहरु रेखाचित्र दुई तले घर दोस्रो तलामा एउटा riser फिड कूलेंट र पहिलो रेडियेटर गर्न प्रमुख लागि प्रदान गर्दछ।
तापमान नियन्त्रण क्रेन द्वारा बाहिर छ। तिनीहरूले प्रत्येक तल्ला मा पहिलो ताप उपकरण अघि स्थापित गर्नुपर्छ।
ठाडो एकल-ट्यूब सिस्टम
निजी घरहरू मा ताप प्रणाली को समान योजनाहरु एक प्राकृतिक कूलेंट परिसंचरण प्रदान गर्नुहोस्। किनकी यो एक परिसंचारी पंप आवश्यकता छैन यो लेआउट को लाभ, शक्ति आपूर्ति स्वतन्त्र छ।
एक महत्वपूर्ण drawback अचाक्ली obliquely एक dilution व्यवस्था लाइन को लागि ठूलो व्यास पाइपलाइन को प्रयोग, साथै आवश्यकता उल्लेख गर्न सकिन्छ। मुख्य बेफाइदा यस्तो एक निजी घरमा ताप सिस्टम ताराहरु रेखाचित्र धेरै aesthetically खुसी खोज्दैन भन्ने तथ्यलाई छ। तर, यो एक परिसंचरण पंप द्वारा हटाउन सकिन्छ।
निजी घरमा ताप प्रणाली को समान योजनाहरु एक महत्वपूर्ण वित्तीय लगी आवश्यक पर्दछ। पनि प्रदर्शन काम को मात्रा, तदनुसार स्थापना लागत वृद्धि, र।
मुख्य लाभ अझ प्रणाली भर कूलेंट वितरण हुन मानिन्छ। अनुसार घरमा बासिन्दा को आवश्यकता संग: - र सबै भन्दा महत्वपूर्ण धेरै बस तापमान अवस्था नियमन।
यस उपकरण पम्पिंग काम निकै सुविधा, दुई-पाइप - आधुनिक संचार स्थापना गर्दा, मुख्य रूप विदेशी कम्पनीहरु जो घटक निर्माताहरु, हामी तपाईंलाई एउटा ग्याँस बयलर को ताप प्रणाली, जो को योजना जडान गर्न सुझाव दिन्छौं।
हीटर छेउमा, तल र diagonally जडित गर्न सकिन्छ। इष्टतम भेद को चयन र रेडिएटर को आकार आफ्नो निर्माण को लागि प्रयोग सामाग्री मा मुख्य रूप निर्भर गर्दछ।
प्रवेश द्वार मा र हीटर को बाहिर निस्कन मा नियन्त्रण वाल्व स्थापना गरिनु पर्दछ। पनि जल ट्याप गर्नुहोस्, मा सिस्टम को सबै भन्दा कम अंक राखिएको हुनुपर्ने बारे मा भूल छैन।
योजना एकल ट्यूब वा दुई - प्रवाह पाइप को ताप सिस्टम बयलर एक चयन जडान निर्भर गर्दछ। दुई पाइप ताराहरु सुसज्जित एउटा सानो क्षेत्र राम्रो संग निजी घर।
यसबाहेक, यस्तो सिस्टम एक परिसंचरण पंप संग सुसज्जित। प्रत्येक कोठा मा thermostats उपलब्धता तपाईं इष्टतम ताप मोड कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईंको सामाग्री संसाधन, र निजी घर सानो क्षेत्र सीमित छन् भने, त्यसपछि तपाईँले एक पाइप ताराहरु गर्न सक्नुहुन्छ।
एकल-ट्यूब सिस्टम प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो भवन को क्षेत्र, 100 उच्च भन्दा पु2हुँदैन। यस मामला मा, तपाईं पम्पिंग उपकरण बिना र प्राकृतिक परिसंचरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै गुना वा विकिरण सर्किट प्रत्येक हीटर को अगाडी को लागि आफ्नै बाफ पाइपिंग राखे र वर्तमान उल्ट्याउन छ मा विशेषता छ। यी लाइनहरु हीटर मा एक कोर्नु मा converge। यस्तो सिस्टम मा, पाइप को लम्बाइ पनि डबल पाइप सर्किट तुलनामा एकदम उच्च छ।
उपयोग गर्नु भन्दा पहिले कूलेंट radiators ब्यालेन्स सिस्टम बीम को वर्दी वितरणको लागि।
ताप सिस्टम को प्रकारको चयन गरिएको छ के को बिना पनि हात वा योजना विशेषज्ञहरु को संलग्नता संग विकास गरिनेछ, यो ईन्जिनियरिङ् संचार डाटा को डिजाइन र स्थापना बरु जटिल काम मानिन्छ कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं आफ्नो क्षमता विश्वास छैन भने, यो व्यावसायिक मद्दत खोज्न बेहतर छ।
यो ताप सिस्टम को प्रक्षेपण सञ्चालनको कुनै पनि मंच मा उत्पन्न गर्न सक्ने त्रुटिहरू जोगिन हुनेछ। भविष्यमा, कमीकमजोरी हटाउन छैन, यो तिनीहरूलाई बस बच्न र सबै देख्छन् राम्रो छ।
आफ्नो हातले balconies मर्मत
कसरी छिटो र inexpensively आफ्नो हात संग घर मर्मत गर्न?
फाइबर प्रबलित polypropylene के हो? प्रबलित polypropylene पाइप: लाभ र बेफाइदा
खेल पालकी सुबारु पैतृक B4
के भने हड्डी जोड्ने तन्तु मर्काइ टखने थियो?
मास्को ठेगानामा Gorzdrav। मास्को मा शहर स्वास्थ्य विभाग औषधि पसल: समीक्षा